Nikola Kalinic oo ay shahaado caafimaad la gashay si uu…. – Gool FM
(Firenze) 18 Agoosto 2017 – Qannaaska Nikola Kalinic ayaa lasoo werinayaa inuu qaadi doono isla dhabbihii saaxiibkii ay Fiorentina wada joogeen ee Federico Bernardeschi isagoo kooxdiisa u keenaya shahaado caafimaad oo caddaynaysa inuu jirran yahay.
Sky Sport Italia ayaa shalay baahiyay in laacibka Kalinic uu diidey inuu la tababarto kooxdiisa Fiorentina, wuxuuna hadda hilinku sheegayaa inuu laacibku u qiil samayn doono maqnaanshihiisa.
Bartilmaameedka AC Milan ayaa daliishan doona inuu la daalaa dhacayo ”diiqad” si loo siiyo fasax shan maalmood ah, taasoo ah wixii uu horay u sameeyay Bernardeschi oo kooxdiisa u keenay shahaado caafimaad, isagoo Viola ku khasbayay inay u fasaxdo Juventus.
''Inter macallin wayn bay heshay, Milan-na si fiican bay isu dhistay'' - Marcello Lippi oo u riyaaqay kooxaha Milanese-ka ah